သင်ဟာ startup တစ်ခုအတွက်အလုပ်လုပ်ချင်ပါသလား။ | Martech Zone
ကြာသပတေးနေ့, ဇန်နဝါရီလ 8, 2009 တနင်္ဂနွေ, ဇွန် 21, 2015 Douglas Karr
အလုပ်မှထွက်သွားသည့်အချိန်ထက်သင်၏အူအတွင်း၌ခံစားချက်သည် ပို၍ ဆိုးသည်မဟုတ်။ ဒေသဆိုင်ရာသတင်းစာမှာအလုပ်လုပ်တုန်းကလွန်ခဲ့တဲ့ ၆ နှစ်လောက်ကပေါ့။ ဒါဟာငါ့ဘဝမှာအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှုအတွက်အဓိကအချက်ပဲ။ ငါဟာပိုမိုမြင့်မားတဲ့အောင်မြင်မှုဆီပြန်သွားမလားဆိုတာကိုဆုံးဖြတ်ရတယ်။
နောက်ကြောင်းပြန်လှည့်ကြည့်လျှင်ကျွန်ုပ်၏အခြေအနေသည်ရိုးသားဖြောင့်မတ်သောသူတစ်ယောက်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ငါသေလုနီးပါးစက်မှုလုပ်ငန်း left နှင့်ယခုအဖြစ်လူသိများသူကုမ္ပဏီတစ်ခုမှထားခဲ့တယ် အတွက်အလုပ်လုပ်ရန်အဆိုးရွားဆုံးအလုပ်ရှင်တစ် ဦး.
Startup ကုမ္ပဏီတစ်ခုမှာအောင်မြင်မှုအခွင့်အလမ်းကမင်းကိုဆန့်ကျင်တယ် ၀ န်ထမ်းများ၏ကုန်ကျစရိတ်နှင့်အကျိုးအမြတ်သည်ကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်နိုင်သည့်မတည်ငြိမ်သောရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၀ န်ထမ်းအတော်များများသည်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုကြီးထွားလာစေနိုင်သည်။
အောင်မြင်သော startup များတွင်အခြားအရာတစ်ခုရှိသည်။ တစ်နေ့တွင်ကောင်းမွန်သော ၀ န်ထမ်းများကိုနောက်တစ်ကြိမ်လွှတ်ပေးရန်လိုအပ်နိုင်သည်။ ၀ န်ထမ်းငါး ဦး ပါသောကုမ္ပဏီသည် ၁၀၊ ၂၅၊ ၁၀၀၊ ၄၀၀ စသောကုမ္ပဏီများနှင့်အလွန်ကွာခြားသည်။
လွန်ခဲ့သည့် ၃ နှစ်အတွင်းကျွန်ုပ်သည်လုပ်ငန်းအသစ် ၃ ခုတွင်လုပ်ကိုင်ခဲ့သည်။
startup တစ်ခုကငါ့ကိုကျော်သွားတယ်။ စီမံခန့်ခွဲမှုလုပ်ငန်းစဉ်တွေနဲ့အလွှာတွေကငါ့ကိုအရမ်းနှံ့ပြီးငါထွက်သွားရတယ်။ သူတို့အမှားမဟုတ်ခဲ့၊ အမှန်တကယ်ကုမ္ပဏီတွင်ကျွန်ုပ်၌ 'fit' မရှိတော့ခြင်းဖြစ်သည်။ သူတို့ကကောင်းကောင်းမွန်မွန်ဆက်လုပ်နေတုန်းပဲကျွန်တော့်ကိုရိုသေလေးစားတုန်းပဲ။ ငါအဲဒီမှာမရှိတော့ဘူး။
နောက် startup ငါ့ကိုထွက်ဝတ်ဆင်! ငါအရင်းအမြစ်များမရှိသောကုမ္ပဏီတစ်ခုအတွက်ကြမ်းတမ်းစက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်အလုပ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ ငါအလုပ်တစ်ခုကိုတစ်နှစ်လုပ်ခဲ့ပြီးသူတို့အားလုံးကိုငါ့အတွက်ပေးခဲ့တယ်။ ဒါပေမယ့်ငါအရှိန်အဟုန်ကိုဆက်ထိန်းထားနိုင်တော့မှာမဟုတ်ဘူး။
ယခုငါနှင့်အတူအလွန်အဆင်ပြေခံစားရယခု startup နှင့်အတူပါ။ ကျွန်ုပ်တို့မှာ ၀ န်ထမ်း ၂၅ ယောက်ခန့်ရှိသည်။ ငါအနေဖြင့်အနားယူသောကုမ္ပဏီဖြစ်လိမ့်မည်ဟုအကောင်းမြင်ပြောကြားလိုသည်။ သို့သော်အလေးသာငါ့အဆန့်ကျင်ကြသည်! ကျွန်ုပ်တို့ ၀ န်ထမ်းရာဂဏန်းအနည်းငယ်ထိရောက်သောအခါကျွန်ုပ်မည်သို့ရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းနိုင်သည်ကိုမြင်ရလိမ့်မည်။ ဤတစ်ကြိမ်တွင်ကျွန်ုပ်သည်ကုမ္ပဏီ၏အောင်မြင်မှုအတွက်အဓိကသော့ချက်ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်သည်ဗျူရိုကရေစီယန္တရား၏အရှိန်အဟုန်ကို ကျော်လွန်၍ ကြီးမားသောကြီးထွားမှုမှတစ်ဆင့်သွက်လက်မှုနှင့်တိုးတက်မှုကိုထိန်းသိမ်းရန်ကြိုးစားလုပ်ဆောင်နိုင်သည်။
အချို့လူများက ၀ န်ထမ်းများများပြားလာပါက startup သည်ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်သောအလုပ်ရှင်ဟုထင်ကောင်းထင်လိမ့်မည်။ ငါလည်းမယုံနိုင်ဘူး ... ဘာမှန်းမသိတဲ့ startup တွေကငါ့ကိုပိုပြီးစိုးရိမ်တယ် ထူထောင်ထားသောကော်ပိုရေးရှင်းနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါကလျှပ်စီးမြန်။ အလုပ်လုပ်သော startup ၏ဘဝတွင်အဆင့်များရှိပါသည်။ သငျသညျအခြို့သောန်ထမ်းဟောင်းထုတ်သွားတော့မည်နှင့်သင်ပို။ ပင်ကြီးထွားလာလိမ့်မယ်။ ကံမကောင်းစွာပဲ ၀ န်ထမ်းအရေအတွက်က startup မှာသေးငယ်တဲ့အတွက်သင့်ရဲ့ဘေးထွက်ရွေ့လျားမှုအခွင့်အလမ်းကနည်းနည်းလေးပါ။
ဒါကရက်စက်တယ်လို့ထင်ရပေမယ့် ၀ န်ထမ်းထက်ဝက်လောက်က ၀ န်ထမ်းတစ်ဝက်ကိုဆုံးရှုံးလိုက်ရတာထက်ပိုပါတယ်။
ဒါကြောင့်…အကယ်လို့သင်ဟာ startup တစ်ခုအတွက်တကယ်အလုပ်လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင် network ကိုအနီးကပ်ထားပါ၊ ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားသည့်ငွေအချို့ကိုသိုထားပါ။ အတွေ့အကြုံမှတတ်နိုင်သလောက်လေ့လာပါ - ကျန်းမာသော startup တွင်တစ်နှစ်သည်သင့်အားဆယ်စုနှစ်အတွေ့အကြုံတစ်ခုပေးနိုင်သည်။ များသောအားဖြင့်အသားအရေထူထူကိုရရှိသည်။
ငါက startup အတွက်အလုပ်လုပ်မှာမဟုတ်ဘူးလား။ အဟ ... မ ၀ န်ထမ်းများကြီးထွားမှု၊ အဓိက ၀ န်ဆောင်မှုခံယူသူ…ဤအရာအားလုံးသည်ကျွန်ုပ်ဘယ်သောအခါမှအရှုံးမပေးချင်သောအံ့သြဖွယ်ရာအတွေ့အကြုံများဖြစ်သည်။
သင်မည်သည့်နေရာ၌ရှိနေသည်ကိုရှာဖွေကြည့်ပါ၊ သင့်ကိုတံခါးဝသို့ခေါ်ဆောင်သွားပါကအံ့အားသင့်စရာမဟုတ်ပါ၊ သင်တည်ဆောက်ခဲ့သောတန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်သောအတွေ့အကြုံနှင့်အတူလာမည့်ကြီးမားသောအခွင့်အလမ်းကိုတိုက်ခိုက်ရန်အဆင်သင့်ပြင်ပါ။
ဇန်နဝါရီ 8, 2009 မှာ 2: 38 AM
ဤအရာအလုံးစုံစစ်မှန်တဲ့မြည်! ဒီအချက်တွေအများကြီးကိုကျွန်တော်သေချာပေါက်သက်သေပြနိုင်မှာပါ။ ၀ န်ထမ်း ၁၀ ယောက်နှင့်အတူဖွင့်ထားခြင်းသည်အောင်မြင်မှုနှင့် ၀ န်ထမ်း ၁၀၀ ရှိသည့်အခါကွဲပြားခြားနားစွာအလုပ်လုပ်သည်။
ငါသတိထားမိအရာတစ်ခုမှာသေးငယ်တဲ့ start ups များအတွက်အလုပ်လုပ်သည်ငါ့ကိုပျက်စီးခဲ့သည်! ငါသည်ကိုယ်အလိုအလျောက်နေ့စဉ်ကြိတ်ဆုံမှပြန်သွားမြင်ယောင်ကြည့်နိုင်ဘူး။
ဇန်နဝါရီ 8, 2009 မှာ 2: 56 AM
ကောင်းတဲ့ပို့စ်! ငါက startup များအတွက်ငါ့အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းတစ်ခုလုံးကိုအလုပ်လုပ်ခဲ့နှင့် startup အကြောင်းကိုငါ့ဘလော့ဂ်အတွက်ဆောင်းပါးတွေကိုရေး။
startup ကမ္ဘာ၏အေးခဲ။ ခဲယဉ်းသောအချက်အလက်များရှိပါသည်။ စဉ်းစားရန်စဉ်းစားသူများ
၁. Startup လုပ်ရန်အလုပ်သည် အကယ်၍ သင်သည်မိတ်ဖက် / ပိုင်ရှင်အဆင့်တွင်ရှိလျှင်ပင်လောင်းကစားဖြစ်သည်။ scumbag တစ်ခုသည်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုလုံးကိုပျက်စီးစေနိုင်သည်။ တည်ထောင်သူတစ်ယောက်ကကုမ္ပဏီကိုမဆုတ်မနစ်ပျက်စီးစေရုံသာမကအတ္တဆန်ဆန်ဆုံးဖြတ်ချက်ချတဲ့အတွက်ကြောင့်မရေမတွက်နိုင်တဲ့ startup တွေမအောင်မြင်ခဲ့ဘူး။
၂။ လစာများသည်ကုမ္ပဏီကြီးများ၏အဆင့် ၄၀% အောက်တွင်ရှိသည်။ အကျိုးကျေးဇူးများကိုနှိုင်းယှဉ်။ မရပါ (များသောအားဖြင့်)
၄။ သင်၏ကုမ္ပဏီသက်တမ်းအတွင်းသင်၏ကုမ္ပဏီသည်ဖြစ်နိုင်ခြေ ၆၀% ခန့်ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသည်။
၅။ သင်ကအရူးဖြစ်ဖို့လိုတယ်၊ ramen noodles လိုမျိုးဖြစ်သင့်တယ်။
ကျွန်ုပ်သည် ၂ နှစ်တာကာလအတွင်းလူ ၂၀ မှ ၁၀၀ အထိကြီးထွားလာခဲ့ပြီး (၆ လအတွင်း ၁၀-၅၀ မှ ၆ လအထိ) (၄ င်းတို့သည်စီးပွားရေးရှိနေဆဲ) တွင်ကြီးထွားလာသောလုပ်ငန်းဆောင်တာများ၌ကျွန်ုပ်၌ ဦး ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများရှိသည်။ ဒါပေမယ့်ငါလည်းတစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက်ပိတ်ပြီးနောက်တစ်ခုထားခဲ့ရတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ဟာနောက်တစ်ခါပြန်သွား ဦး မယ်ဆိုတာငါသိတယ်။ သင်မတည်ငြိမ်မှုကိုကိုင်တွယ်နိုင်ပါသလား?
Startup ကမ္ဘာသည်အစာအိမ်ရှိသူများနှင့်အလွန်အမင်းပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ဖြစ်လိုသူများအတွက်ဖြစ်သည်။ သင်မဟုတ်လျှင်ဝေးဝေးနေပါ။
၎င်းသည်စားသောက်ဆိုင်လုပ်ငန်းနှင့်တူပြီးအားလုံးသည်အပြင်ပန်းမှနှစ်သက်ဖွယ်ကောင်းသည်၊ သို့သော်ချစ်ခြင်းမေတ္တာရှိသည်။ မဟုတ်ရင်သင်ပြောသူမည်သူမဆိုမြင့်တယ်၊ ပြည့်ဝတယ်၊ ပြည့်နေတယ်၊ ​​သိတယ်၊
Apolinaras“ Apollo” Sinkevicius
ဇန်နဝါရီ 8, 2009 မှာ 8: 58 AM
Apolinaras - ဤအချက်၌သင်၏ပါဝင်မှုအတွက်ကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်။ ဒါဟာသေချာပေါက်စိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းတဲ့ဘ ၀ ပါ။ သူတို့ရဲ့ပထမဆုံးအလုပ်တွေမှာရှိတဲ့လူငယ်တွေဟာကြီးမားတဲ့ခြားနားချက်ကိုနားလည်ဖို့လိုတယ်။
ဇန်နဝါရီ 8, 2009 မှာ 3: 51 AM
ငါယေဘုယျအားဖြင့်စတင် ups အကြောင်းကိုသင်၏ရှုထောင့်နှင့်အတူသဘောတူသည်။ သို့သော်သူကပြောရမည်မှာအတွေ့အကြုံတစ်ခုလုံးသည်တည်ထောင်သူ (များ) ၏ခေါင်းဆောင်မှုစွမ်းရည်အပေါ်အခြေခံသည်။
ခေါင်းဆောင်မှုညံ့ဖျင်းခြင်းနှင့်ထိုကိစ္စအတွက်ပျမ်းမျှအားဖြင့်စီမံခန့်ခွဲမှုစွမ်းရည်အောက်တွင်ရှိခြင်းသည်ယေဘုယျအားဖြင့်မကောင်းသောအတွေ့အကြုံများကို ဦး တည်စေသော်လည်းကောင်းမွန်သောခေါင်းဆောင်မှုနှင့်ပျမ်းမျှအားဖြင့်စီမံခန့်ခွဲမှုစွမ်းရည်သည်လုပ်ငန်းအောင်မြင်မှုရှိ၊
ဇန်နဝါရီ 8, 2009 မှာ 9: 03 AM
ငါ '' တစ်ခုလုံး '' အတွေ့အကြုံကိုတည်ထောင်သူအပေါ်မသေချာဘူး။ တည်ထောင်သူများသည်များသောအားဖြင့်စီးပွားရေးသမားများနှင့်စိတ်ကူးယဉ်သူများဖြစ်သည်။ တစ်ခါတစ်ရံတွင်သူတို့သည်ငှားရမ်းခြင်း၊ ရောင်းခြင်း၊ စျေးကွက်ရှာဖွေခြင်း၊ ငွေရှာဖွေခြင်း၊ လုပ်ငန်းလည်ပတ်ခြင်းစသည်တို့တွင်အပြည့်အ ၀ မပါ ၀ င်ပါ - ကျွမ်းကျင်မှုအားလုံးမရှိသောကြောင့်သင်သူတို့ကိုအပြစ်တင်နိုင်သည်ဟုမထင်ပါ။
startup များကိုအကန့်အသတ်ဖြင့်သာလုပ်ရန်နှင့်စွမ်းရည်ကြီးမားသောရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများပြုလုပ်ရန်ဖိအားပေးခံရသည် - အချို့သောအလုပ်များ၊ Apolinaras ဖော်ပြသည့်အတိုင်း၎င်းသည်ကုမ္ပဏီတစ်ခုလုံးကိုဖျက်သိမ်းနိုင်သည်။
တည်ထောင်သူတွေဟာသူတို့မှာရှိတာနဲ့အကောင်းဆုံးလုပ်ပါတယ်။ တစ်ခါတစ်ရံတော့မလုံလောက်ဘူး ဒါက startup တစ်ခုရဲ့အန္တရာယ်ပဲ။
ဇန်နဝါရီ 8, 2009 မှာ 10: 01 AM
ဆောင်းပါးကောင်း ထိုနောက်မှမှတ်ချက်များ။ start-ups တွေဟာကျော်ကြားပြီးရိုးရှင်းအောင်လုပ်ထားတာလို့ကျွန်တော်ထင်တယ်။ အကယ်၍ သင်သည်အမှန်တကယ်ရှိပြီးအိမ်တွင်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုထက်ပိုသောဖွံ့ဖြိုးမှုဖြစ်ပါက၎င်းသည်အတော်လေးရှုပ်ထွေးပွေလီစေနိုင်သည်။ သင်အလုပ်တစ်ခုသို့သွားသည့်အခါပိုင်ရှင်များနှင့်အတူအမြင့်ဆုံးနှင့်အနိမ့်အမြင့်ကိုတွေ့ကြုံခံစားရန်သင်အသင့်ရှိရမည်။
ဇန်နဝါရီ 8, 2009 မှာ 11: 39 AM
အဖြစ်ကောင်းစွာတစ် ဦး ကယ့်ကိုအကြီးအဆောင်းပါးနှင့်အချိန်မီ။ ငါရှိနေစဉ်ကာလကနေပြောင်းရွှေ့ဖို့စဉ်းစားပါ။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ငါ့အတွက်တစ်ခါတစ်ရံဘာတိုးတက်မှုရှိသလဲဆိုတာမသေချာလို့ပါ။ ကျွန်တော်လေ့လာချင်သောအရာများရှိပါသည်။ ကျွန်ုပ်သည်၎င်းကိုအနီးကပ်ရောင်းနိုင်သည်အထိနှင့်မတတ်နိူင်ပါ။ HR စက်မှုလုပ်ငန်းနှင့်အလုပ်လုပ်ကိုင်ရာတွင်စိန်ခေါ်မှုတစ်ရပ်ဖြစ်သည်။
သို့သျောလညျး, ငါကြည့်ရှု opoprtunity ဒီထက်ပို။ ပင်စဉ်းစားစေ, ငါ့အိမ်ကနေလမ်းပေါ်မှာဆင်းစာပေ startup ကြော်ငြာအေဂျင်စီဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဆောင်းပါးကနောက်လအနည်းငယ်အတွင်းမှာကျွန်တော့်ကိုစဉ်းစားတွေးခေါ်စေပြီးကျွန်တော့်နှလုံးဘယ်မှာရှိမယ်ဆိုတာကိုပြပါလိမ့်မယ်။
8:2009 pm တွင်ဇန်နဝါရီလ 12, 37
Great post ။ ကျွန်ုပ်အသက်ရှင်နေသောကုမ္ပဏီငယ်လေးအပေါ်တွင်သက်ရောက်မှုရှိစေရန်ကျွန်ုပ်အားအလုပ်မှထုတ်ပစ်လိုက်သည်။ startup တစ်ခုမဟုတ်ပေမယ့်စဉ်ဆက်မပြတ်ဖြစ်ပေါ်နေသော
8:2009 pm တွင်ဇန်နဝါရီလ 5, 22
ငါလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်ကဘွဲ့ရခဲ့ပေမယ့်တကယ်တော့အများအပြား startup မှာငှားရမ်းရန်ကြိုးစားခဲ့သည်။ ငါဒုက္ခရောက်ပါတယ် ကျွန်တော့်ရဲ့စွမ်းရည်နဲ့အလုပ်ကျင့်ဝတ်က startup အတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်လိမ့်မယ်လို့အမြဲတမ်းခံစားခဲ့ရတယ်။ ငါဖြစ်နိုင်သည်အခါတိုင်း, ငါ့နောက်တစ်နေ့ရာထူးမှာတ ဦး တည်းစတင်ရန်သို့မဟုတ်တ ဦး တည်းအဘို့အလုပ်ဖို့မျှော်လင့်ပါတယ်။
8:2009 pm တွင်ဇန်နဝါရီလ 7, 42
ငါ start-up အတွက်အလုပ်လုပ်သည်ကြီးဖြစ်လိမ့်မယ်ထင်ပါတယ်။ သို့သော်၎င်းသည်ကျွန်ုပ်သည်စီးပွားစွမ်းဆောင်ရှင်တစ် ဦး ဖြစ်လိုခြင်းနှင့်တက်ကြွခြင်း၊ ဒါကကြီးမားတဲ့ကော်ပိုရေးရှင်းကြီးတွေကကျွန်တော့်ကိုပေးလိမ့်မယ်လို့မထင်ပါဘူး။
8:2009 pm တွင်ဇန်နဝါရီလ 8, 07
ပုံမှန်အတိုင်း, ကောင်းသော post ကို။
၁) ဒါဟာအိမ်ထောင်ပဲ၊ ငါပေးမယ်၊ မင်းပေးမယ်
တစ်ခါတစ်ရံတွင်၎င်းကိုဘာသာပြန်ဆိုရာတွင် start-up တစ်ခုတွင်ရှုံးသည်။ စတော့အိတ်ချိန်းသည်ဤကိစ္စနှင့် ပတ်သက်၍ အပြုသဘောဆောင်သောရွှေလက်ထိပ်ခတ်ဖြစ်နိုင်သည်။ သို့သော်သပိတ်မှောက်စျေးနှုန်းများမြင့်တက်မှုနှင့်အတူပမာဏအနည်းငယ်ကိုလျော့နည်းစေသော start-up ကုမ္ပဏီများသည် ၄ ​​င်းတို့၏ ၀ န်ထမ်းများနှင့်ကွဲပြားမှုရှိနေသည်။
စွမ်းဆောင်ရည် vs. 2) ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေး
ကံမကောင်းစွာဖြင့်မကြာခဏလုပ်ငန်းသစ်များကိုကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးနှင့်ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်းများက ဦး ဆောင်သည်။ သင်ဤစွမ်းဆောင်ရည်အပေါ်အခြေခံပြီးဖြစ်လိုရှိ၏
စီးပွားရေးစွမ်းဆောင်ရှင်တစ် ဦး သည်ကျွမ်းကျင်မှုအားလုံးလိုအပ်စရာမလိုသော်လည်း၎င်းတို့သည်သူတို့၏အားနည်းချက်များကိုဖြည့်ဆည်းရန်နှင့်ပတ်ဝန်းကျင်ရှိလူများအားအဓိပ္ပာယ်ရှိရှိနားထောင်ရန်ဉာဏ်ပညာရှိရန်လိုအပ်သည်။
၄။ ၀ န်ထမ်းတစ်ယောက်ပေါက်ဖွားလာခြင်း
ဤအချက်သည်စာရွက်ပေါ်တွင်ကောင်းမွန်နေသော်လည်းအထူးသဖြင့်ခေါင်းဆောင်မှုနှင့် ၀ န်ထမ်းများသည်ငယ်ရွယ်စဉ်ကကဲ့သို့မေးခွန်းများမှမိမိတို့ကိုယ်ကိုမေးခွန်းထုတ်ခြင်းမှကာကွယ်ရန် ၀ န်ထမ်းများအနေဖြင့်သေချာသည်။ အစောပိုင်းအဆင့်ကုမ္ပဏီအတွက်အမှု။
၅။ လူတွေကနံပါတ် ၁ ကိုရှာကြတယ်
မိမိဆန္ဒအလျောက်မဟုတ်သောမြင့်မားသော ၀ န်ထမ်းများ၏လည်ပတ်မှု၏ဆိုးကျိုးများမှာမကောင်းပါ။ ကြောက်စိတ်မှတဆင့်လှုံ့ဆျောမှုကျန်းမာဘယ်တော့မှဖြစ်ပါတယ်။ လူများသည်သူတို့၏နောက်အလုပ်တစ်ခုကိုစိတ်ထဲ ထား၍ အလုပ်မလုပ်သောကြောင့်မိတ်ဆွေများကပြိုလဲလျှင်ကိုယ်ရေးရာဇဝင်ကို ပို၍ ချဲ့လာလိမ့်မည်။
လက်ရှိခေတ် (ဂူဂဲလ်) တွင်အအောင်မြင်ဆုံးသောကုမ္ပဏီများသည် ၀ န်ထမ်းများအားငှားရမ်းသောလက်များကိုမလိုချင်သောကိရိယာများအဖြစ်အသုံးမပြုဘဲလေးလေးစားစားဆက်ဆံကြသည်။
ငါက start-up, ပတ်ဝန်းကျင်မှာအစဉ်မပြတ်ငါပြန်လာသောအရာ, အပြန်အလှန်ဖြစ်ပါသည် - သင်ကသင်၏ခေါင်းဆောင်မှုနှင့်အတူအပြန်အလှန်နှင့်ဘုံအခြေစိုက်စခန်းတည်ဆောက်နိုင်လျှင်၎င်းသည်မထိုက်မတန်။ အကယ်၍ သင်၏ခေါင်းဆောင်မှုသည်အလဟ is ဖြစ်ခြင်း၊ ပုံမှန်မဟုတ်ခြင်း၊ net-net၊ ဖြတ်တောက်ခြင်းနှင့်ခြောက်သွေ့ခြင်းများရှိပါကသင်၏အလေးချိန်သည်2သို့မဟုတ် 3X အနေဖြင့်ကြုံတွေ့ရသောအခါသင်၏ခေါင်းကိုကုတ်ခြစ်ထုတ်ပစ်လိုက်လျှင်၎င်းတို့သည်၎င်းကိုမရရှိနိုင်ကြပါ။ ကိုယ်ပိုင်အတ္တနှင့်မလုံခြုံမှု။
8:2009 pm တွင်ဇန်နဝါရီလ 8, 08
အဲ့ဒါအပြင် မည်သည့် ကုမ္ပဏီသည် ၀ န်ထမ်းများထံမှနာရီပေါင်းများစွာတောင်းဆိုနိုင်သည်။ Venture ကျောထောက်နောက်ခံပေးထားသောကုမ္ပဏီငယ်များသည်ဘဏ်တွင်သန်းချီ။ ရှိနိုင်ပြီးနှစ် ၁၀၀ ရှိသောကုမ္ပဏီများသည်ငွေသားစီးဆင်းမှုပြissuesနာများနှင့်ရင်ဆိုင်ရနိုင်သည်။ တောက်ပပြီးကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းတဲ့မန်နေဂျာတွေဟာနေရာတကာမှာပုန်းနေကြတယ်။
ကုမ္ပဏီ၏အသက်သည်သင်၏အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းဆိုင်ရာဆုံးဖြတ်ချက်များအားအသိပေးသင့်သည်မဟုတ်ပါ၊ သို့သော်ထိုအဖွဲ့အစည်းအတွင်းရှိသူတို့၏ယဉ်ကျေးမှုနှင့်ယုံကြည်မှုများ။ သင်က startup တစ်ခုအတွက်အလုပ်လုပ်ချင်လားမလိုမမေးနဲ့။ စိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းသည့်ကုမ္ပဏီများတွင်မည်သည့်အရည်အချင်းများကိုသင်ရှာဖွေသည်ကိုရှာဖွေပါ။ ထည့်သွင်းသည့်ရက်စွဲကိုလျစ်လျူရှုပြီးသင်၏အိပ်မက်များကိုလိုက်နာပါ။
8:2009 pm တွင်ဇန်နဝါရီလ 10, 39
အသက်ကတစ်ခုတည်းသောခြားနားချက်မဟုတ်ဘူး။ မကြာခဏ Startup များသည်ငွေရေးကြေးရေးနှင့်လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်များအကန့်အသတ်နှင့်သာရှိသောချေးထားသောငွေများမှလုပ်ဆောင်နေသည်။ ၎င်းတို့သည်ကြီးထွားရန်နှင့်ဖြစ်နိုင်သမျှအမြန်ငွေသားစီးဆင်းမှုကိုရရန်ကြီးမားသောဖိအားများအောက်တွင်ရှိသည်။
ကုမ္ပဏီတစ်ခု၏အစတွင်ရှင်သန်ရပ်တည်ရေးသည်ယဉ်ကျေးမှုနှင့်ယုံကြည်မှုများထက်များစွာသာလွန်နေသည်။ သင်ရှာဖွေနေသည့်ယဉ်ကျေးမှုနှင့်ယုံကြည်မှုများရှိသည့်ယနေ့မည်သည့်ကုမ္ပဏီကြီးကိုမဆိုကြည့်ပါ၊ သူတို့ငွေသား၊ ကြွေးမြီများနှင့်ဆူညံနေသောရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကိုဖြေဆိုသည့်အခါသူတို့၌သူတို့အခွင့်အလမ်းများမရှိခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်၏လုပ်ငန်းတွင်ပရဟိတလုပ်ငန်းများနှင့်“ အစိမ်းရောင်” ထောက်ခံသူများအနည်းငယ်မျှသာရှိသော်လည်းကမ္ဘာကြီးကိုပြောင်းလဲရန်ကျွန်ုပ်တို့တွင်အမြတ်အစွန်းများမရှိပါ။
9:2009 pm တွင်ဇန်နဝါရီလ 7, 21
သင်၏ထုတ်ပြန်ချက်များသည်သင်၏အဓိကစာတမ်းကိုပြသသည်။ ကျွန်ုပ်ယုံကြည်သည်မှာလူငယ်များနှင့်အဖွဲ့အစည်းများအကြားသိသိသာသာ၊ အခြေခံကျပြီးအကျိုးသက်ရောက်မှုကွာဟချက်ရှိသည်ဟုဆိုရန်ဖြစ်သည်။ သို့သျောလညျး, ငါအောက်ပါသတိပြုပါ:
သင်ကငွေရေးကြေးရေးနှင့်လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်များအကန့်အသတ်ဖြင့်သာချေးထားသောငွေများမှအလုပ်လုပ်သောကုမ္ပဏီများအကြောင်းရေးသည် သူတို့သည်ကြီးထွားရန်နှင့်အပြုသဘောဆောင်သောငွေသားစီးဆင်းမှုကိုအမြန်ဆုံးရရှိရန်ကြီးမားသောဖိအားများအောက်တွင်ရှိနေသည်။ ဤသည်မှာကြီးမားသောမော်တော်ကားထုတ်လုပ်သူ ၃ ဦး ၏ဖော်ပြချက်နှင့်တူသည် မည်သည့် ရုန်းကန်နေရသည်သောကုမ္ပဏီ။ ဒါဟာ startups မှသီးသန့်မဟုတ်ပါဘူး။
သငျသညျ "ကုမ္ပဏီ၏အစမှာစင်ကြယ်သောရှင်သန်ရပ်တည်ရေးအားဖြင့်ယဉ်ကျေးမှုနှင့်ယုံကြည်မှုများဝေးလွန်းနေကြသည်။ " သို့သော်သတင်းစာလုပ်ငန်း၏establishedရာမကုမ္ပဏီကြီးမှသင့်ကိုအဘယ်အရာကမောင်းထုတ်ခဲ့သနည်းကိုဆက်လက်ရှင်သန်ရန်ပျက်ကွက်ခြင်းမဟုတ်လော။ သင်ကဒီဟာကကြောက်စရာကောင်းတဲ့အလုပ်ပဲ၊ သင်ကရပ်စဲခြင်းဆိုတာအစပြုသူမဟုတ်ဘူး
နောက်ဆုံးအနေဖြင့်သင်၏တတိယအချက်မှာ“ ကမ္ဘာကြီးကိုပြောင်းလဲရန်ကူညီရန်” အမြတ်အစွန်းလိုအပ်သည်ဟူသောအကြောင်းအရာကိုပုံရသည်။ kiva, Freenet နှင့်သင်တန်း GNU / Linux များ ၎င်းတို့သည်အမြတ်အစွန်းများများစားစားမစဉ်းစားဘဲကမ္ဘာကိုအကျိုးရှိစေခဲ့ပြီးဖြစ်သောကုမ္ပဏီများဖြစ်သည်။
ငါ့ကိုယ်ပိုင်အချက်အတော်လေးခြားနားသည်။ ဖြစ်နိုင်ပေမဲ့ အချို့သော အလွန်ဆက်စပ်မှုရှိသောအရည်အချင်းများ၊ startup ကုမ္ပဏီများနှင့်သမားရိုးကျအလုပ်ရှင်များအကြားတစ်ခုတည်းသောအာမခံချက်ခြားနားချက်သည်အသက်ဖြစ်သည်။ အသက်အရွယ်နှင့် ပတ်သက်၍ မည်သည့်ယုံကြည်ချက်ကသူတို့၏အမြင်များကိုအသိပေးသည်ကို startup တွင်အလုပ်အကိုင်ရှာဖွေရန် (သို့မဟုတ်) ရှောင်ရှားရန်စဉ်းစားနေသူမည်သူမဆိုအားကျွန်ုပ်စိန်ခေါ်လိမ့်မည်။
ဒီမက်ဆေ့ခ်ျဟာပညာရေးဆိုင်ရာ၊ သင်မည်သည့်နေရာတွင်အလုပ်လုပ်ကိုင်လိုသည်ကိုဆုံးဖြတ်သည့်အခါကုမ္ပဏီ၏အရွယ်သည်စတင်ရန်အကြောင်းပြချက်မဟုတ်ပါ။ အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုချင်းစီတွင်သင်တွေ့ရသောသူတို့၏လုပ်ငန်း၊ တန်ဖိုးများ၊ လုပ်ငန်းကျင့် ၀ တ်၊ အလုပ်ခွင်ယဉ်ကျေးမှုနှင့်လူပုဂ္ဂိုလ်တို့ကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်သည်။
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေ၊ ရိုးရာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေအတွက်အလွန်အမင်း ဦး စားပေးရွေးချယ်တာဟာကျနော့်အမြင်အရဆိုရိုးစကားတစ်ခုပါပဲ။ အလုပ်ရှာသူများအားခွဲခြားဆက်ဆံသည့်အနေဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်အလုပ်ရှင်များကိုအဓိပ္ပာယ်ပြည့်ဝသောသတ်မှတ်ချက်၏အခြေခံကိုဆန်းစစ်သင့်သည်။ ဤသည်ထည့်သွင်း၏နေ့စွဲမပါဝင်ပါဘူး။
9:2009 pm တွင်ဇန်နဝါရီလ 4, 40
ငါက start-up ကိုအတိတ်5လများအတွက်အလုပ်လုပ်ခြင်းနှင့်ပျော်မွေ့ခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အနည်းငယ်မျှသောအရင်းအမြစ်များကိုကွန်ရက်စာမျက်နှာပြန်လည်ပုံစံချခြင်းနှင့်တိုးတက်အောင်ပြုလုပ်ခြင်းများပြုလုပ်သည်။ လာမယ့်နှစ်ရဲ့အနာဂတ်အတွက်ကျွန်တော့်အတွက်စိတ်လှုပ်ရှားစရာများစွာရှိနေပါတယ်။ လာမယ့် ၆ လကျော်မှာနောက်ထပ်အလုပ်တွေများလာမယ်၊ နောက်ထပ် site ကိုထပ်မံတွန်းအားပေးလိမ့်မယ်ဆိုတာကျွန်တော်သိတယ်၊ ဒါပေမယ့်အဲ့ဒါကအကျိုးဖြစ်ထွန်းမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။ လူတိုင်းအတွက်တော့မဟုတ်ဘူး၊ ဒါပေမယ့်ငါကရိုးရာအလုပ်တစ်ခုလိုချင်ဘူး။